Cali Max´ed Geedi,” Xaq iyo xaq daro ma tartami karaan dulmina cid qaadan karta iyo cid samayn karta majirto.
Halkaan ka dhageyso hadalkii RW Cali Max. Geedi
Ra’iisal Wasaaraha Dowladda KMG Soomaaliya Cali Maxamed Geeddi ayaa isagoo ka hadlayay Xaflad qado ah oo uu u sameeyay Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya ee ku fikirka ah waxaa uu wax yar ka hadlay khilaafka ka dhex taagan mas’uuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya.
← Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya oo Shacabka Soomaaliyeed u soo diray warsaxaafadeed ku saabsan Ciida Barakeysan.
Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya oo mugdi iyo muran ku sugan iyo Miles Zanawi oo ku soo food leh magaalada Baydhabo. →